မတျ 6, 2020 – Healthy Life Journal
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ Belching လေတက်တာကို Burping, Ru-ctus, Eructation စသဖြင့်ခေါ်တယ်။ အစာလမ်းကြောင်းထဲက လေတွေအထက်တက်ပြီး ပါးစပ်ကနေ ထွက်လာတာဖြစ်တယ်။ အများအားဖြင့် အစာမျိုပြွန်နဲ့ အစာအိမ်ထဲက လေတွေတက်-ထွက်လာတာပါ။ လေတက်ရင်း အသံပါထွက်တယ်။ တခါတလေ အနံ့အသက်လဲပါမယ်။ လူတိုင်း အဲလိုဖြစ်ကြပေမဲ့ လူ့ရှေ့သူ့ရှေ့...
စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) တစ်ခါက ထက်မြက်တဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ရှိတယ်။ သူ့ကို သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က မေးတယ်။ “တကယ်လို့ မင်းလမ်းလျှောက်နေရင်းနဲ့. . ရှေ့တစ်လှမ်းလှမ်းရင် သေမယ်.. နောက်တစ်လှမ်းဆုတ်ရင် မျက်လုံးကန်းမယ်၊ မင်းက ရပ်နေလို့လည်း မရဘူး . . လျှောက်တော့ လျှောက်ရမယ်ဆိုပါစို့၊...
ကလေးလိုချင်ပါတယ် . . .
ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ Q. ကျွန်မအသက် ၄၂ နှစ်ပါ။ ကလေးလိုချင်လို့ အကြံဥာဏ်လေးလိုချင်လို့ပါ။ နွယ်သာကီ နွယ်သာကီ(FB) A. အိမ်ထောင်ကျတာ ဘယ်နှနှစ်ရှိပြီလဲ၊ အခုမှ ကလေးစယူမှာလား၊ အရင်ကမွေးဖူးလား ဒါတွေကို သိဖို့လိုပါတယ်။ အသက်...
ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ Q. ကိုယ်ဝန်ခြောက်လကျော်ပါပြီ။ ချောင်းဆိုးတာတစ်ပတ်ကျော်နေလို့ ဘာဆေးသောက်ရမလဲ သိချင်လို့ပါ။ Thein Htike San(FB) A. ဒီရာသီမှာတော့ အေးလာတယ်၊ အမှုန်အမွှား ဖုန်ထူတယ် . . ဒါတွေကြောင့် ချောင်းဆိုးတဲ့လူနာတွေ...